MKS: အဘအောင်မင်းခေါင်(ဘိုးမင်းခေါင်) ၏ ဆုံးမစာ
“ကျောင်းဆရာမ ဘဝ ကို ငယ်စဉ် ကတည်းရောက်ခဲ့တဲ့ “ ကလေးတို. ဆရာမ လေ ” ၊ အင်း - ခုတော့လည်း “ လူကြီးတို. ဆရာမ ပေါ့ ” ။ ရေဒီယို က အသံလွှင့် နေတာလည်း နှစ်ပေါင်း မနည်း တော့ပါပဲလား ။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းကိုတော့ အမြဲရှေ့ တန်းတင်ထားလေ့ရှိတာ ငယ်စဉ်ကတည်းကပါ။
ဆရာမကိုယ်တိုင်သီဆိုသောခလေးတို့ ရဲ့ ဆရာမသီချင်းလေးပါ
အဘအောင်မင်းခေါင်(ဘိုးမင်းခေါင်) ၏ ဆုံးမစာ
အလွန်ကောင်းသော ဆုံးမ-လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သောကြောင့်(သိပြီးသူများမှအပ) မသိသေးသူများအတွက် ကူးယူ တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ ----းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ၁) လုပ်တိုင်းမဖြစ် စိတ်မညစ်နှင့် - ကိုယ်လုပ်တိုင်းသာ ဖြစ်နေပါက- ဘယ်မှာ “အနတ္တ“ ရှိမည်နည်း ။ ။ ၂) ပြောတိုင်းမရ ဒေါမထနှင့် - ကိုယ်ပြောတိုင်းသာ ရနေပါက- ဘယ်မှာ “အနတ္တ” ရှိမည်နည်း ။ ။ ၃) ကြံတိုင်း မပေါက် စိတ်မဖေါက်နှင့် - သင် ကြံတိုင်းသာ ပြီးမြောက်ပါက - ဘယ်မှာ “အနတ္တ“ ရှိမည်နည်း ။ ။ ၄) ဆင်းရဲကြုံမူ မညည်းညူ နှင့်- ချမ်းသာချည်းသာ ကြုံနေပါက - ဘယ်မှာ “ဒုက္ခ“ ရှိမည်နည်း ။ ။ ၅) ပျက်စီးတိုင်းလျှင် မပူပင်နှင့် - မပျက်စီးကာ ခိုင်မြဲပါက ဘယ်မှာ “အနိစ္စ“ ရှိမည်နည် ။ ။ ၆) အာရုံဟူသမျှ မတောင့်တနှင့် - အာရုံတိုင်းသာ တောင့်တပါက - ဘယ်မှာ “လောဘ“ ဆုံးမည်နည်း ။ ။ ၇) အရာရာမျိုး စိတ်မဆိုးနှင့် နေရာတိုင်းသာ စိတ်ဆိုးပါက - ဘယ်မှာ “ဒေါသ“ ဆုံးမည်နည်း ။ ။ ၈) သိဉာဏ် မလိုက် သင်မမိုက်နှင့် သိဉာဏ်မရ မိုက်နေပါက - ဘယ်မှာ “မောဟ“ ဆုံးမည်နည်း ။ ။ ၉) “ဗုဒ္ဓတရား“ မေ့မထားနှင့် ဆုံးမတိုင်းသာ ကျင့်ကြံပါက ဘယ်မှာ “နိဗ္ဗာန်“ ဝေးမည်နည်း ။ ။
ရေးသားတင်ပြသူ Sayama May ရေးသားတင်ပြချိန် 5:00 AM
ရေခဲရေ နှင့် ရေအေးသောက်သူများအတွက်
လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့ ကျုံးနံဘေးတွင် ညနေဖက် အပြေးလေ့ကျင့်နေသူ တစ်ဦးကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာ ပန်းဝင်လာချိန်တွင် ရေခဲစိမ်...
ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့မိန်းမပျို (သို့ ) ရေသူမ(Mermaid)- လင်းရှုး(လင်းပိုင်)အကြောင်း
ဒီပို့ လေးကို အလင်းရောင်ကြယ် ဘလောက်ဂါမှတစ်ခုမှဖတ်မိယင်းကူးယူ၍ ဗဟုသုတရသလေးဖြစ်ဝေမျှလိုက်ပါတယ် စာချစ်သူတို့. မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ သော ကျမ်...
အလွန်ကောင်းသော ဆုံးမ-လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သောကြောင့်(သိပြီးသူများမှအပ) မသိသေးသူများအတွက် ကူးယူ တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အားလုံး ရွှင်လန...
ပဲံတက်ဇနီးမယားဆိုတာ ဘာလဲ ?
မကြာသေးတဲ့ တစ်ချိန်က ဘတ်မိလိုက်ရတဲ့ စာပိုဒ်လေးတစ်ပုဒ်ကြောင့် ဒီဆောင်းပါး ကို ရေးမိလျက်သားဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါ။ ခေါင်းစဉ်က ” ပွဲ...
“ ဝဋ် ”ဆိုတဲ့စကား ......
ကလေးတို့ရေ “ ဝဋ် ”ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးရဲ့ သဘောက အင်မတန် ကျယ်ပြောလှပါတယ် ။ တို.များ လူသားတွေဆိုတာကလည်း လောဘ -ဒေါသ- မောဟ ဆိုတဲ့ ကိလေသာ တရားတွေနဲ....
ဘာလိုလိုနဲ. တစ်ဝါဆို ခဲ့ပြန်ပါပြီ
ကလေးတို.ရေ -- ဘာလိုလိုနဲ. တစ်ဝါဆိုခဲ့ပြန်ပြီနော် ။ တို.များ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုအရ သာသနာ့ဘောင်အတွင်းက သံဃာတော်များလည်း ဝါဝင်ကြရပြန်ပြီလေ...
ကွမ်းရွက်၏ ကျန်းမာရေးကောင်း/ဆိုး အကျိုးကျေးဇူးများ
ဆေးဘက်ဝင်ကောင်းကျိုးမှာ ============== ကွမ်းရွက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ကယ်လ်စီယမ်၊ ကာရိုတင်း၊ ရိုင်ဘိုဖလေဗင်၊ နိုင်ယာစင်၊ ...
အမှားမြင်လျှင် - အမှန်ပြင်
“မမှားသော ရှေ.နေ - မသေသော ဆေးသမား ” ဤလောကသားများအလယ်မှာမရှိသ လောက်ကို ရှားလှမယ်ထင်ပါတယ် ။ လူ.အသိုင်းအဝန်းမှာကြည့််ပါက ကင်းသူဟူ၍ ရှာမတွေ....
ကလေးတို.ရေ - “ မြန်မာအစ တကောင်းက ” ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းကို အမြန်ရေးပေးပါလို.တိုက်တွန်းလာကြပေမဲ့ အလုပ်လေးတွေများနေလိုနောက်ကျသွားရပါတ...
အမှတ်မထင် ရန်ကုန်ခရီးစဉ် (၂)
အမှတ်မထင် ရန်ကုန်ခရီးစဉ် (၂) အော် - လူအမျိုးမျိုး - စိတ်အမျိုးမျိုး ၊ ကြုံရ ဆုံရ ဘုံဘဝ မှာလေ ။ တစ်ေ...
Myanmar Australia Youth Fm
ကျမ္မာရေးနှင့် ပညာပေး (4)
ဆရာတော်ဘုရား၏ အဆုံးအမများ (1)
တပ်မတော်နေ. အမှတ်တရ (4)
ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့် ရအောင် (2)
ုံ လူငယ်ကဏ္ဍ (9)
Shwe Oo မြန်မာ-နိုင်ငံခြား
ပင်မမိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်္ဂလာရိပ်သာ (ပခုက္ကူမြို့)
မင်္ဂလာပါရှင်လို့ နုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ... ဝါသနာအရစာလေးတွေရေးခြင်တာကြောင့်ဒီဘလောက်ကလေးကို ဆရာမတစ်ပည့် မလေးရှားရောက်ကျောင်းသားဟောင်းလေး အလင်းရောင်ကြယ်များဘလောက်နှင့် သူ၏ ညီငယ်များ I.T ဘလောက်ဂါအဖွဲ့ လာရောက်ပြုပြင်သွားပေးတာဖြစ်ပြီး... ဆရာမဘလောက်သို့ ရောက်လာသောမိတ်ဆွေသဟာများကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ၍mail address--may.kyawshin@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်...မြန်ပြည်သားအပေါင်းဘေးဘယာဝေးလို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေ...